Afọ gara aga bụụrụ afọ ịtụnanya maka mụ na azụmaahịa m. The refocus and attention to my customers has fruitful and I am so thank for the ịrịba ahịa m nwere! Ihe ịma aka m nwere ya adịzi ọrụ (nke m hụrụ n'anya) na ahụ ike (nke m na-eleghara anya). N’afọ gara aga, mmerụ ahụ́ ndị m na-akpa na àgwà ọjọọ ndị m na-akpa emewo ka m mebisie ike ruo n’ókè nke ukwuu ma mee ka m gharazie inwe nsogbu.
Na njem njem ụgbọ njem DellWorld, Enwere m ohere iji gbanwee nzukọ ma tụọ anya na ndị ahịa na m ga-arụ ọrụ n'okporo ụzọ. Ekpebiri m ịkwọ ụgbọala si Indianapolis gaa Las Vegas, na-aga n'okporo ụzọ ndịda bụ nke gbanwere ndụ.
Ọtụtụ oge m ala maka njem ahụ ejirila na nyocha nke ọ bụla n'ime 10 ma ọ bụ ndị gbara ajụjụ ọnụ anyị ga-eme pọdkastị Ihe ngosi Dell. Ogologo isiokwu na ojiji nke teknụzụ karịrị echiche gị - hụ na ị ga-edebanye aha. Anọkwara m ọdụ na ngosipụta influencer n'izu a na amụma mmadụ-teknụzụ - nke mere ka m chee ọtụtụ ihe banyere njem a.
N'ihi na m na-ebu m akụrụngwa, M gbazitere a 2018 Chrysler Pacifica jiri mgbịrịgba niile na mkpu. Atụmatụ gụnyere:
Igwefoto adọba ụgbọala 360 - Amaghị m ụdị anwansi ha na-eji, mana nkwado ndabere maka ebe a na-adọba ụgbọala abụghị ihe ọzọ na ọpụrụiche.
Mgbe anyị na-eche banyere ndị a dị ka njirimara, eziokwu bụ na nke a bụ ọdịnihu nke mmekọrịta mmadụ na igwe. Onweghị ihe weere ọrụ m site n'aka m… ihe ndia nile nyere aka ma me ka mmekorita m na igwe di elu. Ha mere ka ụgbọala m dị nchebe, nyere m aka idozi ezigbo gas gas, ma mee ka ntụrụndụ si na ekwentị m banye n'ụgbọala. Nke a bụ ihe kpatara na anaghị m echegbu onwe m banyere ọdịnihu, ana m atụ anya ya.
Ka m ruru Texas, New Mexico, Arizona, na ugbu a Utah, enwere m oge ụfọdụ na enweghị njikọ na ntanetị. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị n'etiti ịnyagharị! M nnọọ ụgbọala ma were ya niile na. Ọ dịghị alerts, beeps, haptic nzaghachi… dị nnọọ juu. N'otu oge, akwụsịrị m na Navajo Bridge mgbe anyanwụ dachara, jee ije n'èzí, enwere m ihe ijuanya - ọ nweghị ihe ọ bụla. Enweghị mkpọtụ, enweghị nnabata, enweghị ndị mmadụ, ịnweghị ike ịnụ ifufe. Amaghị m na ọ dịtụbeghị mgbe ahụ m zuru ike.
M na-achọpụta kwa ụbọchị, wee kwụsị oge na ụlọ ahịa kọfị. Taa, ọ bụ Rocklọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmiri Rock Rock. Kedu ka nke a si lee:
Yabụ, achọrọ m ime ka ị mata ihe kpatara - mgbe afọ 15 bipụtara - ị hụbeghị ọtụtụ posts izu ole na ole gara aga. Na nri m laghachiri na egwu, ụbụrụ m na-enweta ikuku ọhụrụ, mkpụrụ obi m sitere n'ike mmụọ nsọ, yana nnukwu ogbako nke afọ niile n'otu ọnwa… Ana m atụ anya ị nweta nguzozi na ndụ m na May.